တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို မေတ္တာနဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေ မပေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? – BurmeseHearts
တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို မေတ္တာနဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေ မပေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ?
တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို မေတ္တာပေးဖို့ ပျက်ကွက်သွားမယ် ၊ နွေးထွေးမှု ၊ ချစ်ခင်မှု ၊ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူးဆို ဘာဖြစ်မလဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုတော့ ဘာမှထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ တသက်စာ သင်ယူမှုစွမ်းရည် ၊ သင်ယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကိုတော့ ကြီးစွာသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို မေတ္တာနဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေ ပေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာအားသာလဲ?